विवाहपछि मोटाउने डर, यसरी राखौं आफुलाई फिट - VOICE OF NEPAL
२० माघ २०७५, आईतवार ०५:३९ 188 ??? ???????
विभिन्न शोधले देखाएको छ, विवाहपछि अक्सर महिला मोटाउँछन् । यसका अनेक कारण छन् । विवाहपछि उनीहरुले आफुलाई घर-गृहस्थीमा लगाउँछन्, दैनिक जीवन बद्लिन्छ, विवाह वा प्रेमको तनावबाट मुक्त हुन्छन्, राम्री देखिनुपर्ने भन्दा पनि स्वास्थ्य रहनुपर्ने मानसिकता विकास हुन्छ । यस्ता अनेक कारणले महिलाहरु विवाहपछि मोटाउँछन् ।